Kedu isiokwu na ọchụchọ ọchụchọ ga-eme ka okporo ụzọ gaa Amazon Amazon ụzọ kacha mma?
Ọ dịghị mkpa ikwu na nchọpụta isiokwu bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na Nchọpụta Nyocha Search (SEO). N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ dịghị ụzọ ọzọ ị ga-esi meziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog ma gosipụta na nchọta mbụ nke Google nke ọkachamara n'ịntanetị nke ụwa. N'ebe a, ọ bụ ihe dị mkpa na isiokwu ndị ziri ezi bụ. Ma n'oge ụwa nke ecommerce na azụmahịa na-asọ mpi nke ukwuu, ọ bụ akụkọ dịtụ iche.
Ọ pụtara na maka ụlọ ọrụ niche ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa ọ bụla a na-ewu ewu (dị ka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na Amazon onwe ya) enwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ gbasara nchọpụta mkpokọta nke a na-ekwesịghị ileghara anya. Dịka otu ihe ahụ bụ ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ịkwọ ụgbọ okporo ígwè na Amazon - مكاتب نقل عفش. Ihe a bụ ma eleghị anya, ọ bụ naanị ụzọ na-akpụpụta ndepụta zuru oke nke aha ndị na-ere ahịa n'elu-ahịa ka ị wee nwee ike iji ha mee ihe n'ime atụmatụ ọnụọgụ ahịa nke achụmnta ego nke search engine.
Ọ bụ ya mere ị na-agba ọsọ nyocha ọchụchọ zuru ezu nke a na-elekwasị anya n'ebumnuche ziri ezi ziri ezi bụ nanị ụzọ dị irè iji mee ka ịzụ ahịa okporo ụzọ na ngwaahịa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe niile ịchọrọ bụ iji mee ka mgbatị dị mma na ntinye nchịkọta omume iji zụọ ihe ndị ịzụtara na ihe ndị ọzọ na-emekarị mkpebi nke na-ekpebi mkpebi ndị na-emekarị tupu ndị mmadụ emeso nkwa ịzụta. Ma enwere ụfọdụ ihe ndị bụ isi na-ejikarị mkpụrụokwu ndị kasị baa uru, nke a na-atụ anya ọ bụghị nanị iji tọghata ma ọ bụ ime ka ị bụrụ ezigbo ego mgbe niile.
Ya mere, nke a bụ ihe na-eme ka "mkpokọta ọlaedo" gị, nakwa na ha nwere ike ịkwanye ụgbọ okporo ígwè gị ngwaahịa Amazon. N'ikpeazụ, ị ga-erite uru site na ihe nlereanya azụmahịa zuru oke, nke a ga-ahazi ma mee nke ọma nke na ndị mmadụ dị njikere imeghe akpa wallets ha ma jiri ego kpuchie ọnụ - ego ọ bụla achọrọ iji nweta ngwaahịa a chọrọ.
Atụmatụ Atọ Nke Atọ Nke kachasị emepụta ihe
Nnọọ Mmasị Ọchịchọ - na okwu ndị ọzọ, isiokwu "ọlaedo" na ihe ndị ọzọ na-eme nchọnchọ ọchụchọ kpọmkwem iji nwee ike ịmepụta okporo ụzọ gị na ngwaahịa Amazon, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ nwere mpaghara azụmahịa.
Mfe na Rank - pụtara na ha na-atụ anya ịnweta nkwụsị nke asọmpi karia ma ọ bụ karịa, n'otu oge ahụ na-egosi na a na-achọta okwu ọ bụla e nyere na nke a ma na-ejikarị ya eme ihe. ndị ahịa na-azụ ahịa na-ewere òkè ọdụm nke mkpebi ha iji mee ka ịzụta karịsịa na Ịntanetị.
Nchọpụta Nchọpụta Dị Ike - echere na ihe ngwọta kachasị mma ị ga - eme bụ ịmalite ịzụ ahịa, ya mere ọ na - esiri ndị mmadụ ike iji ego - n'ụzọ nkịtị ozugbo ha nwere nke mbụ ile anya na isiokwu ahụ, dịka ọmụmaatụ nke gosipụtara na nchịkọta ndepụta gị.